Zviite iwe pachako gavheni ovheni Art sens - mazano eimba nebindu
22.07.2014 Yakatumirwa na: Art Sense
Kunze kwekona, Iro bindu, Zvemba nebindu, Zviite iwe pachako
Zviri nyore kugadzira yakovheni? Chaizvoizvo, kugadzira nzvimbo dzemoto uye mhando dzese dzeanodzikisira moto ndewe hunyanzvi hune zvakavanzika zvadzo uye ruzivo rwakapihwa natenzi mudzidzi. Nekudaro, kana zvasvika kune yakavharwa imba yekubatanidza kamuri, zvinhu zviri nyore. Kuzadzikiswa kwemaonero anopiwa mubindu chiito chinogona kuitwa nekubudirira nevasina-basa. Fomu racho rinogona kuvhurwa kana kutengwa. Ehe, mukushaikwa kwezivo pamusoro pekuvakwa kwezvivakwa zvekuvaka, zvinodikanwa kutsvaga rubatsiro revanyanzvi. Sarudzo yemidziyo inofanirwawo kunyatso bvunzwa, asi zvichidaro, iyi oiri ndeyepfungwa iri nyore kuita uye yese ndiro yakarongedzerwa mairi inokuchidzira iwe nekunhuhwirira kwayo.
Sezvakaita yedu yekukumbira kune Bindu BBQ, huwandu hweruzivo runofanira kuverengerwa uye, kunyanya kukosha, kure nezvinhu zvinopisa. Kana iwe uine kugara uchingoyerera kunzvimbo yekuvakira, zvine musoro kuti kuvhurwa kwechoto kwakafanana nazvo, asi izvi hazvina kukosha.
Kuronga kwakanaka basa ndizvo zvakavanzika zvekubudirira. Kuona zvaunokanganisa usati waita kunosevha iwe mari nenguva. Iko hakuna kurongeka kwakakwana uye kwepasirese. Kana chimwe chinhu chichifanira kuvakwa panenge paine zviuru zvemashoko zvinofanirwa kuverengerwa. Ndokusaka isu tichakupa iwe iyo pfungwa uye mamwe ehuwandu, uye kune iyo yakasara iwe iwe uchafanira kuisa mune basa uye kufunga kwekugadzira. Kukura kwechoto kunonyanya kukosha. Vanotsanangurawo mashandiro ayo, i.e. chii chichave chakabikwa kana kuputa mukati maro.
Kutanga tanga kuona upamhi hwenhambwe (G) uye kukwirira kwayo (E). Zvichienderana navo, zviyero zvekunze zvechimiro chinotsigira (A, B, C, D) uye kukwirira kwechimney (F) zvakatemwa zvakare. Verenga zvakare zviyero zvisina kuyera (a uye b), kana iwe uchitarisira imwe, pamwe nemhando uye chikamu chechinyorwa chinodikanwa (c) nehukuru chaihwo hwezvinhu (d). Izvo zvinodikanwa kuti muviri we chimney urenge 50% yakakwira kupfuura choto, kana kana iyo yakareba (E) iri 50cm, ipapo chimney chinofanira kunge chakakwira (F) kanenge 75cm (kubva pachigadziko). Iyo upamhi uye kukwirira kweiyo arch / orifice (e uye f) inofanirwa kuve inogona kuve inenge 50% yekukwirira kwayo (E). Kusiyanisa muchimiro uye hukuru zvinogoneka, sezvo izvi zvichinyanya kutendamira pamusuwo, uye kuburikidza nazvo zvinogona kudzorwa nekubatanidzwa. Ivo, kune rumwe rutivi, vanoparadzanisa kamuri yekubatanidza kubva kune chimney body, vachigadzira nzvimbo yakasungwa.
Sarudza izvo zvekuvakisa zvekutanga uye uverenge huwandu hwaunoda.
Mune urwu rudzi rwekuvaka, zvakasiyana Bindu remadhebhe, zvinokurudzirwa kugadzira chigadziko, sezvo uremu hwakazara huchikonzera kudonha kana kupindika. Dururira pasi yakasimbiswa yakasimbisa uye bvumira kuti iome. Pairi kuvaka kubva pamabhuru kana zvidhina iwo matatu anotsigira madziro, isa fomu uye mudururire yechipiri yakasimbiswa slab. Mushure mekunge yaoma, dhonza, ronga, uye gadzirisa chigadziko chechoto chenguva yemberi. Shandisa zvidhinha zvinodzivirira kupisa. Vaka denderedzwa remahara ezvikorekete akasimba ezvitinha zvakavakomba, vachisiya nzvimbo yegomba. Pavari, pakona (kuwana chimiro chechitenderedzwa) mitsara inotevera. Zvinokurudzirwa, kana iwe wasvika wechipiri kana wechitatu mutsara, kuti uite arch yekuvhura. Izvi zvinowanzoenderana nemusuwo kana musuwo wakasarudzwa. Izvo zvakare zvakanaka kugadzirira gobvu makadhibhodhi kana styrofoam matemplate ane chimiro uye arc yehemisphere. Iwe unozogona kuvasiya mukati me fomu kuti vakutungamirire iwe paunovaka iwe uchitsigira imba yekumusoro. Shanda zvishoma uye nenzira; siya nguva yakaringana yekuomesa chinhu chimwe nechimwe. Paunopedza kuvira uye musanganiswa wacho wakasimba, uchave unogona kupwanya matepi aya nekukwevera mudura. Bvisa iyo arch yegomba nezve 1 / 2 kubva paupamhi hwayo kunze kwenzvimbo, uchisiya gomba remuchina. Inofanirwa kuve yakamiswa zvekuti kana yekuvhurwa yakavharwa, kamuri yekubatanidza haisvikike neokisijeni. Kazhinji, yekuwedzera, yekuwedzera insulation yedenga yekudonha, mabwe, ivhu uye kunyangwe ekushongedza neanegirazi mosaic kana terracotta mataira inowanzo kupihwa. Kana zvese zvave kugadzirira, bvumidza kuoma zvakakwana kweinenge vhiki uyerevheni oveni yako.
bindu, gadheni pizza poto, choto chekugadzira, kunonzwika muyadhi, pfungwa, mazano ebindu, mazano eaya, mazano epamba, mazano eimba, zano revira, chimney, ita nzwi, uzviitire choto, zviite iwe pachako, nzvimbo yemoto ine chimney, choto, ovheni mubindu, oveni muyadhi, pizza oveni, zvidhinha zvidhinha, chitofu, mazano epamba, zvemukati dhizaini, fenicha, zvemukati mazano, dhizaini mazano, imba yemazuva ano, kurongedza mazano, hunyanzvi mazano
Cuisine yemazuva ano
Mamwe mazano akanaka ezvekudya zvemazuva ano. Maitiro muKomendi Yemazuva ano MaKitchen ane ...
Yakanaka yezai ganda ganda
Pfungwa iri nyore uye yakanaka yekuti ungagadzira sei yakatanga yezai crust frame. Kutanga ndiko ...
Kunyangwe iyo nheyo yekutanga pakuvaka imba yemoto iri kushanda, ayo ...
Yakarongedzerwa Inotapira Zuva reKeke
Ichi chiitiko chiri nyore uye chinoshanda kwazvo chechingwa chakashongedzwa. Shanda neyakagadzirira-inogadzirwa puff keke ...
Cozonac - chiRomania cashew ne walnuts, mazambiringa akaomeswa uye cocoa
Tsika yechiBulgaria neRomania Kozunats vane hupfu hwakafanana hwehupfu, pasi ...
Khachapuri (ChiGeorgian - ხხჭჭპურპურ by ხხხჭო (hach) - "cottage cheese" uye
Kugadzirwa kwekuvakwa kwemabwe ndeimwe yekare uye nguva-yakaedzwa nzira dzekupedza ...
Kune akasiyana mafomu ekuvaka makona ekuzorora uye kunakidza.
Tsvaga pazvinochengeterwa - Sarudza mwedzi - Kukadzi 2020 Ndira 2020 Zvita 2019 Mbudzi 2019 Gumiguru 2019 Nyamavhuvhu 2019 Nyamavhuvhu 2019 Chikunguru 2019 June 2019 Mai 2019 Kubvumbi 2019 Kurume 2019 Kukadzi 2019 Ndira 2019 Zvita 2018 Gumiguru 2018 Nyamavhuvhu 2018 Nyamavhuvhu 2018 Chikunguru 2018 June 2018 Mai 2018 Kubvumbi 2018 Kurume 2018 Kukadzi 2018 Ndira 2018 Zvita 2017 Mbudzi 2017 Gumiguru 2017 Nyamavhuvhu 2017 Nyamavhuvhu 2017 Chikunguru 2017 June 2017 Mai 2017 Kubvumbi 2017 Kurume 2017 Mbudzi 2016 Chikunguru 2016 June 2016 Mai 2016 Kubvumbi 2016 Kurume 2016 Ndira 2016 Zvita 2015 Mbudzi 2015 Gumiguru 2015 Nyamavhuvhu 2015 Nyamavhuvhu 2015 Chikunguru 2015 June 2015 Mai 2015 Kubvumbi 2015 Kurume 2015 Kukadzi 2015 Ndira 2015 Zvita 2014 Mbudzi 2014 Gumiguru 2014 Nyamavhuvhu 2014 Nyamavhuvhu 2014 Chikunguru 2014 June 2014 Mai 2014 Kubvumbi 2014 Kurume 2014 Kukadzi 2014 Ndira 2014 Zvita 2013 Mbudzi 2013 Gumiguru 2013 Nyamavhuvhu 2013 Nyamavhuvhu 2013 June 2013 Mai 2013 Kubvumbi 2013 Kurume 2013 Kukadzi 2013 Ndira 2013 Zvita 2012 Mbudzi 2012 Gumiguru 2012 Nyamavhuvhu 2012 Nyamavhuvhu 2012 Chikunguru 2012 June 2012 Mai 2012 Kubvumbi 2012 Kurume 2012